DistroView: Kubuntu | Linux မှ
Rogergm70 | | ဖြန့်ဝေ
1 Kubuntu ကဘာလဲ?
Kubuntu ဆိုသည်မှာ KDE ကို desktop environment တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသော Linux distribution တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Blue Systems နှင့်၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကတီထွင်သည်။
၎င်းသည်တရားဝင် Ubuntu မှဆင်းသက်လာပြီး၎င်း၏အမည်မှာ Bemba ဘာသာစကားဖြင့်ဆိုလိုသည်။ Ubuntu ("humanity") မှဆင်းသက်လာသည်။ အစပိုင်းတွင် K သည်သင်၏ desktop (graphical environment) နှင့် program များဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသော KDE community ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အခြားဖြန့်ဝေမှုများကဲ့သို့၎င်းသည်အခမဲ့ GPL လိုင်စင်အောက်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေသည့်ဆော့ဝဲလ်အထုပ်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဒါကိုငါမကြိုက်တဲ့ distro တစ်ခုပါ ၎င်းသည်မောက်စ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အလွန်အထိခိုက်မခံဘဲအရင်းအမြစ်များကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ ကာတွန်းကားများသည်အေးမြသော်လည်း RAM ကိုသုံးသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကအဲဒါကိုစမ်းသပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကသူ့ထင်မြင်ချက်ပဲ။
Operating system ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ မောက်စ်ကာတွန်းအသစ်တွေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာကိုငါသဘောကျတယ်။
ကာတွန်းတွေကိုယ်တိုင်ကကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာပြသနာကစတင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကမျက်နှာပြင်ပေါ်ကအိုင်ကွန်တွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်လို့ရုပ်ပုံကလှည့်စားနေတယ်၊ ​​အဲဒါကကျနော့်အမြင်မှာအရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဒါ့အပြင်သူတို့ကိုထိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေလိုပုံဖော်ထားနိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ခုမှ…နိဂုံးအနေနဲ့ကြည့်ရတာအမြင်အာရုံကောင်းတဲ့ operating system ဖြစ်ပေမယ့်ပြုပြင်တာတွေမရှိဘူး။
ဤသည်မှာ GNU / Linux တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသောဆွေမျိုးတစ် ဦး ၏အမြင်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်တွေမှာမင်းကိုမင်းပြောနိုင်တဲ့မှတ်ချက်တွေကမင်းမှတ်မိတယ်ငါမှတ်မိသေးတယ်၊
· Swap သို့မဟုတ် 'Swap Area'၊ အိမ်နှင့်ဖိုင်စနစ်အပါအဝင် disk ထဲ၌အခန်းကန့်များရှိသည်။
· mouse sensitivity ကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချပါ။
[5 of 5] အသွင်အပြင် [5 of 5] [3 of 5] အသုံးဝင်မှုရှိစေရန် [3 of 5] [3 of 5] Performance [3 of 5] [1 of 5] အစပြုသူများအတွက်လွယ်ကူခြင်း [1 of 5] [5 of 5] တည်ငြိမ်မှု [5 of 5] [2 of 5] ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးထားခြင်း [2 of5of 3] ] [၃ မှတ်] [/ ၃ မှတ်]
themes များကိုကူးယူပြီးသင်၏ KDE ကို http://kde-look.org တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ
Kubuntu ကို Download လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » DistroView- Kubuntu
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်မဆန့်ကျင်တဲ့အတွက် ၀ မ်းနည်းမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်မှာပြောတဲ့အတိုင်း - "လူတိုင်းကဒီစီတန်းလှည့်လည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတယ်"
ငါစားပွဲခုံတွေအားလုံးကိုသုံးပြီး KDE၊ အထူးသဖြင့် Kubuntu တို့နှင့်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်။
ငါ Mint-KDE, OpenSuse, Mageia နှင့်အခြားသူများမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစေပြီးအဓိကစနစ်အဖြစ်ငါအသုံးပြုသောတစ်ခုမှာ Netrunner ဖြစ်ပြီးယခုတွင်ဗားရှင်း 13.12 RC ရှိပြီးနောက်ဆုံး version ကိုမကြာမီထုတ်လုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ငါက Gnome သို့မဟုတ် Unity ထက်အရင်းအမြစ်များပိုမိုစားသုံးသည်ကိုမမြင်ပါ၊ ဆန့်ကျင်။ သူတို့တန်းတူနီးပါးရှိပြီး mouso သို့မဟုတ် icon များ၏ sensitivity သည်သင်၏စက်ကိုညှိရန်မဟုတ်ဘဲဖြန့်ဖြူးရန်မဟုတ်ပါ။
Netrunner ငါအရမ်းအကြံပြုလိုတယ်၊ မင်းဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။ http://germanlancheros.blogspot.com.ar/2013/12/ya-salio-netrunner-1312-rc.html
ထင်မြင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည်ဆောင်းပါး၌သင်ရေးထားသောစာတိုင်းကိုလေးစားပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သဘောမတူကြောင်းပြောရပါမည်။
ပထမ ဦး စွာ၊ သင်၏မိတ်ဆွေ / မိသားစုဝင်ကအိုင်ကွန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာကိုရည်ညွှန်းသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ သို့သော်လည်း GNU / Linux desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးတွင် KDE သည် Windows အသုံးပြုသူများနှင့်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အတူသိ, ထို့ကြောင့်။
အကယ်၍ သူတို့သည်အခက်အခဲများရှိပါကသင်၌ရှိသည့် configuration options ပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အားပြောပါ။ Windows အသုံးပြုသူမည်သူမျှ desktop သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ system ကို wallpaper များပြောင်းခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ သို့မဟုတ် အရောင်များ?
ငါသဘောတူသည် kubuntu သည် windows နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည် windows7/ vista ကဲ့သို့ပင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်အမြင်တွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ငါသည်လည်းဤ post ကိုလေးစားသည်။ တခြားသူတွေဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာသိရတာကောင်းတယ်။
ငါပြောမည့်အရာအတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော်ဤ "ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း" သည်အမှန်ပင်ရုပ်ဆိုးပါသည်။ အရင်က Xubuntu ကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်အနေဖြင့်ထင်မြင်ချက်ပေးရန်သာသင်ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်မထားပါနှင့်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကြိုဆိုနိုင်သည်။ Virtual Machine ပေါ်တွင်စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
ဒီဖြန့်ဖြူးမှုနဲ့ Chakra (သို့) OpenSUSE စတဲ့ KDE အခြေပြုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအကြားသင်တွေ့ရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့လည်းအကြံပေးလိုပါတယ်။ ဖြန့်ဝေမှုကမ္ဘာသည်အစပိုင်းတွင်လွှမ်းမိုးနိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်အသုံးပြုသူအသစ်များကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမြင်ပေးလိမ့်မည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသွားရန်မလိုပါ။ အသုံးပြုသူအသစ်တစ် ဦး သည်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သောအရာကိုမှတ်ချက်ပေးပါ ဤကိစ္စတွင်ကဲ့သို့ဆော့ဝဲစင်တာ၊ ဒရိုင်ဘာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြားအရာများအကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခြင်း။ ဗားရှင်း ၁၃.၁၀ နှင့် ၁၂.၀၄ LTS အကြားကွာခြားချက်များလည်းပါ ၀ င်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် animations နှင့် pointer နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးသောကြောင့်၎င်းသည် KDE အတွင်းရှိထို parameters များကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြနေသည်။ ဒါကပြန်လည်သုံးသပ်အရည်အသွေးပိုပေးပါလိမ့်မယ်။
ရမှတ်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အတိုင်းအတာကိုသတ်မှတ်ရမည်ကိုမလိုလားပါ၊ သို့သော် Ubuntu မှဆင်းသက်လာသူအားလုံးသည်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြောင့်သုံးစွဲရန်လွယ်ကူခြင်းသည် ၅ အနက်မှ ၁ ဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောသောအခါကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ Ubuntu ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် install လုပ်ပြီး Linux ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့အပြင်အကူအညီမလိုဘဲအလျင်အမြန်လေ့လာသင်ယူပြီးသောသူငယ်ချင်းများကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။
ဤရွေ့ကားသင့်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုလုံးဝသဘောတူသည်။ ယခုတွင်ငါသည် kubuntu မှအတိအကျရေးသည်။ ထောင်နှင့်ချီ။ ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားတစ်ခုထက်ပိုသောအရာတစ်ခုကိုနှစ်သက်သည်။ လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိနေသည်။ သင်အမည်နှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောအခက်အခဲများကိုအနည်းဆုံးဖြေရှင်းရန်ထည့်သင့်သည်။
ငါပြောတာကငါပြောတာကိုသဘောမတူနိုင်ဘူး၊ ၀ င်းဒိုးတွေကိုလည်းငါမပြောဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ distro တစ်ခုချင်းစီကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့မလိုဘူး။
- pointer နှင့်၎င်း၏အမြန်နှုန်းသည်သင်၏ mouse သည်ကိုင်တွယ်သော dpi ကိုပင်လွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ KDE ရှိအရာအားလုံးကဲ့သို့၎င်းသည် CONFIGURED လုပ်နိုင်သည်၊ သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းနှေးကွေးစွာထားနိုင်သည်။
- RAM ကိုသုံးစွဲမှုသည်များစွာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သောရေကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အသုံးပြုနေသောပမာဏထက်ပိုမိုမဖြုန်းတီးပါက၊ ၉၉% အသုံးပြုပြီးဖြစ်လျှင် KDE ရှိအရာအားလုံးသည် Configure လုပ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်မလိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသာပိတ်လိုက်ပါ။
အမြင်အားဖြင့်တော့အများကြီးမရပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆုံးမှာတော့သူက KDE တစ်ခုပါ၊ ပြီးတော့ kubuntu နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ desktop နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်တူအတွေ့အကြုံမျိုးရှိမှာပါ။
ငါ desktop ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲ distro သူ့ဟာသူအကြောင်းပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။
၎င်းသည် Canonical အမိုးအကာမှဝေးရာသို့ရွေ့လျားနေသည်ကိုတွေ့သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏စမ်းသပ်သည့်ကိရိယာများ (DV Series ဗီဒီယိုနှင့်အပူပေးသည့်ပြproblemနာရှိသည့် HP Lap အဟောင်း) တွင်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ နောက်ဆုံးကြိုးစားခဲ့သည်။ ကအတူတူပင်နေဆဲဖြစ်ခဲ့သည်။
bloatware အတွက်သာမကပဲ kernels နှင့် custom drivers များတွင်နှေးနှေးသောနှင့်အလွန်အကျွံတင်သောစနစ်။
သက်ရောက်မှုများ / ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပင်ထားသော်လည်း၎င်းကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီအထက်မှစတင်ခြင်းကိစ္စသည်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်လာခြင်းကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုများ (အစီရင်ခံပြီးနောက်အမှားအယွင်းအစီရင်ခံပြီးနောက်) နှင့်စနစ်ပျက်သွားခြင်း
သေချာတာပေါ့၊ Kubuntu အပြင်ဘက်မှာပြsurelyနာတစ်ခုလို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Fedora, Arch ကို (ဒီနေရာမှာပျံသန်းနေတဲ့လမ်းအတိုင်း deribadas)၊ OpenSuse ကို install လုပ်ပါ၊ အပူချိန်ဘယ်လောက်ကျလဲ၊ ဘယ်လောက်ထပ်တိုးမလဲဆိုတာကြည့်ဖို့။
* buntu သည်သူတို့၏ရွှေခေတ်ရှိခဲ့ပြီး SL ကိုများစွာကူညီခဲ့သည်၊ သို့သော်ယနေ့သည်အလွန်စမ်းသပ်မှုအဆင့်တွင်ရှိသည်။ (SL တွင်ဤအဆင့်များသည်များသောအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည်) ကျွန်ုပ်သည်ယင်းကိုမအကြံပြုပါ။ ) ဟန်ချက်ညီမှုနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုရှာဖွေနေသောအသုံးပြုသူများအတွက်၊
ငါသဘောမတူနိုင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံးပြproblemနာမရှိဘဲ ၉ လတာ ၀ န်ခံခဲ့သည်။ မနေ့ကငါပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အရာများစွာကိုချိုးဖောက်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂြိုလ်သားဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဤသို့သောအဖြစ်အပျက်များစွာတွင်အထီးကျန်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့ crystal ball ကိုအခြေခံပြီးခင်ဗျားတို့လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ငါ့ကိစ္စမှာငါကတခြား distros တွေနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်၊ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ပြtoနာ0ရှိရင်အခြားတစ် ဦး အတွက်အခြေခံသန့်ရှင်းတဲ့တပ်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြXNUMXနာမရှိဘူး၊ မည်သည့်အမှားမပြသို့မဟုတ်အခြားနေ့တိုင်းတက်ဆွဲထားခြင်း၏အတိုင်းအတာအထိမဟုတ်ပါဘူး။
ဟာ့ဒ်ဝဲကိုအပြစ်တင်တာကျွန်တော်ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် buntu (ပိုကောင်းတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပံ့ပိုးမှုရရှိထားသည့် distro) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘုံစက်တွေနဲ့အတူအဲဒါကိုလက်ခံလို့မရပါ။
ငါကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့အမှားအယွင်းတွေလည်းရှိခဲ့ရင်အဲဒါဟာအထီးကျန်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ဘူး ("* buntu DV9xxx" ကိုရှာဖွေကြည့်ပါ)
haha အဆိုးရွားဆုံး virus ကတော့ user xD
ငါတစ်ခုခုအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့ command ကိုရိုက်ထည့်တဲ့အတွက် root power မရှိဘဲနဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
အများအားဖြင့် Ubuntu တွင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့်အမှားအယွင်းများနှင့် derivatives များသည်အလွှာ ၈ အမှားများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများနှင့်ပြည့်နေသည့် distros များ၌ဘာကိုလုပ်မလဲမသိဘဲအရာရာတိုင်းကိုပြုပြင်သည်။
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ Ubuntu စက်ကိုအမှန်တကယ်စက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ၎င်းသည် .deb package များကိုပြုပြင်ရန်နှေးကွေးသောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့် aptitude နှင့်အတူမပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်သည် Windows Vista ကို Debian Wheezy နှင့်အသုံးပြုသည်ဆိုပါစို့။ သူတို့၏ fanboy အနေအထားနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထံမှ၎င်းကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Kubuntu (တိကျသော Pangolin) သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် (ပိုကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေ p) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် loaded distro ဖြစ်ပြီးအမှားအယွင်းများရှိသည်ဟုဆိုသူများအတွက်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့မှတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားကြောင်းသေချာသည် ယုတ္တိနည်းအရ ပိုမို၍ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့် liveCD၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက် K3b သည်၎င်းကိုထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သော်လည်း mp3 codec (ထိုကဲ့သို့) ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောစာတစ်စောင်အမြဲတမ်းပို့ခဲ့သည်။
ငါအကြံပေးချင်တာက netinstall ကနေစမ်းကြည့်ပါ၊ အဆင့်မြင့်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုပ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားကခြားနားချက်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။
netinstall အားဖြင့် CD ကို Live install မပါဘဲဆိုလိုပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
Ubuntu minimal + KDE ကိုဆိုလိုသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် netinstall ဖြစ်သော်လည်း Kubuntu မဟုတ်ပါ။
Ubuntu Minimal + KDE = မဆိုးဘူး။
သင်၏အကဲဖြတ်မှုအများစုနှင့်ကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောမတူပါ။ ၎င်းသည်အသုံး ၀ င်ပြီး ၀ င်းဒိုးမှပြောင်းရွှေ့လာသူများအတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်။
အမှန်တရားကတော့ခင်ဗျားလုပ်တဲ့အလွန်မကောင်းတဲ့အကဲဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒါကိုအသုံးပြုခဲ့သူတစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ် မူတည်၍ ထင်မြင်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်မသိဘူး၊ Kubuntu ဟာအကဲဖြတ်မှု (သို့) ထင်မြင်ချက်ကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးထိုက်တန်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ linux ကမ္ဘာမှာအတော်လေးအတွေ့အကြုံရှိသူ၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ကနေ Ubuntu ကိုအခြေခံထားတယ်၊ Lubuntu ကိုအခြေခံပြီးတခြားသူတွေနဲ့အခုလောလောဆယ် Kubuntu 10 နဲ့အတူကျွန်ုပ်သည်မှန်သည်မှာကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။ အရမ်းပျော်ပေမယ့်သွားပါ၊ လူတိုင်းကသူတို့လိုချင်တာကိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ ပိုများနေ ဦး မည်။
အဘယ်သူမျှမပြစ်မှု, သင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအလွန်ညံ့ဖျင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း ... သင်၏ထင်မြင်ချက်များလည်းပုဂ္ဂလဒိare္ဖြစ်ကြသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ထက်မက ပိုမို၍ မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည် (များစွာသောသူတို့သည်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်အရသာအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်)
မကောင်းသောသုံးသပ်ချက် - ကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သော်လည်း Kubuntu သည်ပိတ်ဆို့ထားသောဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းများပါလာသင့်သည်၊ အကယ်၍ သင် panel မှကုန်ဆုံးသွားသည်ကိုသင်မသိပါက xD ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်သို့မဟုတ် icon များသည်သင်နှင့်ကြုံတွေ့ရလျှင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်) ။ ဟားဟားမင်းစားပွဲပေါ်ကနေသုတ်လိုက်တာကငါ့ကို xD ရယ်လိုက်တယ်
Hmmm၊ DistroView စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားလုံး ... ငါရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်၊ အဲဒါဟာငါ့အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် DesdeLinux ကိုထည့် ၀ င်မှုကတန်ဖိုးထားတယ်။ အခြားတစ်နေရာရာမှကျွန်ုပ်ဖတ်သောဝေဖန်မှုများမပြုလုပ်မီအပြုသဘောဆောင်သောအရာများကိုသာယူပါ။
Kubuntu နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟာပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အမှန်တရားကတော့ KDE ကိုအဆတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့ XD လိုခိုးတဲ့လူတစ်ယောက်လိုငါနှိပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ distro ကိုငါအထူးချစ်တယ်။
အဲဒီအစား DesdeLinux ရှိစာဖတ်သူများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်စာရေးဆရာများကိုသူတို့အသုံးပြုသောအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုနည်းပညာအရစွန့်ခွာ။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုစွန့်ခွာရန် DistroView ပြုလုပ်ရန်အဆိုပြုသည်။ ဥပမာ - "DistroView: elementaryOS, my perfect distro" (← "my" ဟူသောစကားလုံးကိုမှတ်သားပါ) ကျွန်တော် Gentoo, KaOS, openSUSE, Debian, Arch စသည်ဖြင့်အနည်းငယ်ဖတ်ချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများ DistroView အပိုင်း၌။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများဆုံးရရှိထားသည့်အရာမှာ“ စတင်သူများအတွက်လွယ်ကူခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။ သင်က ၅ ခုအနက် ၁ ခုကိုသင်ပေးသည်။
အမှန်တရားမှာ Kubuntu သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဖြန့်ချိသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Ubuntu ကို အခြေခံ၍ KDE desktop environment ကိုအသုံးပြုသည်။ Windows သည်အသွင်အပြင်အားဖြင့်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။
မီနူးကို နှိပ်၍ သင်လိုအပ်သည့် application ကိုဖွင့်ရန်အခက်အခဲကဘာလဲ။ စိတ်မကောင်းပါ။ သင်ဟာ GNU / Linux နှင့်အတွေ့အကြုံမရှိကြောင်းရှင်းလင်းသော်လည်း၊ Kubuntu နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်မှားယွင်းပါသည်။ သင်သည် Linux, OS X သို့မဟုတ် Win ဖြစ်ပါစေ operating system အသုံးပြုရန်ပါရမီရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ငါထုတ်ဝေမှုကိုဖျက်ပစ်သင့်တယ်၊ အဲဒါက Kubuntu အကြောင်းအချက်အလက်ကိုရှာနေသူတွေကိုသာလုပ်ပြီးထည့်သွင်းလိုက်တာနဲ့၊ သင်ထည့်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့စာကိုဖတ်ပြီးနောက်မှာသူတို့ပါးစပ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အရသာရှိတယ်။
ကျနော့်အမြင်အရ KDE သည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးရွေးချယ်စရာများနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်၌ကြောက်မက်ဘွယ်သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်ရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင်ဘယ်တော့မျှပျက်ကွက်ခြင်းမရှိပါ။ အရမ်းကောင်းတယ်
ငါကောင်းသော, မျှတသောနှင့်မကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုကြပါပြီ။ ဤအခြေအနေတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုသည်မှာပုံကြီးချဲ့နေသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအရာကိုထုတ်ဝေခြင်းနှင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုထုတ်ဝေခြင်းကြားခြားနားချက်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပျင်းရိသည်အလွန်ပျင်းရိ DistroView ခေါင်းစဉ်သည်ထိပ်ဆုံးမှဖြစ်သည်။
netinstall အားဖြင့် CD ကို live install မပါဘဲဆိုလိုတာလား။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ "
သင် CD ကိုဆိုလိုတာလား သို့ဆိုလျှင်အဖြေမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ ငါ (system, မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင် (Gnome, XFCE, KDE, စသည်) မရှိဘဲ install လုပ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီး) လိုအပ်သောအရာကိုသာတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (Kubuntu-Desktop option - option -no-install-ထောက်ခံ + သင်လိုအပ်သမျှ) - ကို install လုပ်သည်။ မင်းပြောတာကမင်းဆိုလိုတာက
ubuntu minimal + KDE ဆိုလျှင် netinstall ဖြစ်သော်လည်း Kubuntu မဟုတ်ပါ။
ငါ "ဒီဟာ netinstall ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် Kubuntu မဟုတ်ဘူး" အကြောင်းကိုအစိတ်အပိုင်းကိုနားမလည်ပေမယ့်
မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? Kubuntu သည်သင်ရရှိသောအရာမဟုတ်လောနောက်ဆုံးတွင် Kubuntu သည် Ubuntu base + KDE (သို့မဟုတ်နားလည်ပါသည်) ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့သင် Kubuntu ရလိမ့်မည်။
Kubuntu base သည်ပြီးပြည့်စုံသော Ubuntu မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ယခုတွင်၎င်းသည် canonical ၏ "control" တွင်မရှိတော့သောအရာများကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖော်ပြရန်မှာမကြာသေးမီကအလွန်လူကြိုက်များသောအရာတစ်ခုမှာ Kubuntu ၏ XMir သို့မဟုတ် Mir ကိုအသုံးပြုရန်ငြင်းဆန်ခြင်းဖြစ်သည်။
Ubuntu + KDE ကိုသင်တပ်ဆင်ပါက XMir / Mir ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် (၁၄-၁၀ မှစဉ်းစားသည်ဆိုပါက KDE သည် XD ကိုထောက်ပံ့သည်)၊ တရားဝင် Kubuntu ဒေါင်းလုပ်ကိုသုံးသောသူများကမူအလိုမရှိပါ။
သင်သည် Debian + Unity ကိုသွင်းယူနိုင်ပါက၎င်းသည် Ubuntu ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
Ubuntu + Cinnamon တို့မှာ Mint ရှိတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။
အကယ်၍ သင် system နှင့် Kubuntu desktop နှစ်ခုလုံးကိုရရှိပါက၎င်းသည် Kubuntu ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သိသည့်အတိုင်း Kubuntu netinstall မရှိပါ။
ubuntu + kde ကို netinstall install လုပ်မယ်။ ပိုပြီးသန့်ရှင်းပြီးစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့စနစ်ရှိတယ်။ အခုဆိုရင်သင်ဟာအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဆိုရင် Manjaro နဲ့ KDE တို့နဲ့ဘာကြောင့်မတူတာလဲ ???
ကောင်းပြီ၊ ခင်ဗျားကိုကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချအောင်မချန်ထားပါဘူး၊ အမှန်တရားကတော့အရာရာဟာအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူး၊ အထူးသဖြင့် (ငါပြောခဲ့သလိုပဲ) တိတိကျကျဗားရှင်းမှာ Mir ကခြားနားချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Kubuntu ဟာ Ubuntu အခြေပြုစနစ်ကဘယ်လောက်ဝေးတယ်ဆိုတာကိုစပြီးရှာတော့မယ်။ လေးစားပါတယ်
ကျနော့်အမြင် - ဒီဟာက KDE အကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှထဲမှာအများဆုံးပုဂ္ဂလဒိive္ထင်မြင်ချက်ပါ။ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် PC များ၌အသုံးပြုသောအလေးနက်ဆုံးမှာ Hackintoch မှ Aqua ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Debian Wheezy တွင် KDE 4.8 ကိုအသုံးပြုသည်။ အမှန်တရားမှာ KDE (အထူးသဖြင့်ဂရပ်ဖစ်များ) ၏ configurations များကြောင့်အထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန် desktop ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဗေဒဘက်အနေဖြင့်၊ ပထမအားဖြင့်သင်သည်ပုံမှန် KDE interface ကိုအလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြောဆိုပြီးနောက်ရိုးရှင်းသော KDE-Look link ကိုထည့်လိုက်သည်။ သင် Kubuntu တွင် KDE အခင်းအကျင်းမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့လျှင်၎င်းသည် Ubuntu ကို KDE နှင့် / သို့မဟုတ် Kubuntu နှင့်အတူသုံးသူများစွာအတွက်များစွာအသုံးဝင်လိမ့်မည်။
packet ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် packet transfer speed တွင်ဤအချက်အလက်သည်၎င်း၏မရှိခြင်းကြောင့်သိသာထင်ရှားပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Ubuntu သည် .deb package ကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှေးကွေးသည်။ သို့သော် Ubuntu ၏တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသူများစွာသည်ဗေဒဆိုင်ရာရှုထောင့်များထက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချို့ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းအတွက်ချီးကျူးခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့်ဤတစ်ကြိမ်တွင်သင်အသုံးပြုသော packet များနှင့်မှီခိုနေရသည့် distro များ၏မှီခိုမှုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ Ubuntu မှဆင်းသက်လာသော distros များသည် layer 8 အမှားအယွင်းများလွန်းသောကြောင့်သတိပြုရန်လိုသည်။ သင်သည်ထိုအထိခိုက်မခံသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကောင်းစွာမရှင်းပြပါက၎င်းတို့ကိုသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံမကောင်းပေ။ Ubuntu အသုံးပြုသူအများစုသည် GNU / Linux distro အားလုံးတွင်ရှိသည့် command manual ကိုကြိုတင်မသုံးသပ်ပဲထိုအထိခိုက်မခံ Ubuntu ပြင်ဆင်မှုများကိုလေ့ကျင့်လေ့ရှိကြသည်ကိုသတိရပါ။
ရမှတ် - ၂/၅ ။
Yuriy Istochnikov ဟုသူကပြောသည်
အစကတည်းကသင်သည်သူ့ကိုသူ့ကိုတွန်းလှန်ခဲ့သည်။ အကြံဥာဏ်အနေနှင့် ပို၍ "ငြီးငွေ့ဖွယ်" ဖြစ်သည်။
Xubuntu၊ Fedora Cinnamon တို့နှင့်အတူ Kubuntu သည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကပြdistနာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဓိကလက်ပ်တော့ပ် (AMD နှင့်) သည်စကားမများဘဲအသုံးပြုသည်၊ Fedora နှင့်မတူပါ။ အဲ့တာနဲ့ငါ့ကွန်ပျူတာ BOILS (အပူလွန်ကဲမှုတိုက်ပွဲတွေဟာနာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ HP တစ်ခုပါ။ ) Kubuntu နဲ့အတူအခမဲ့ဒရိုင်ဘာကအပူပေးနေတုန်းကအသင့်အတင့်သုံးနိုင်တယ် (အပူအအေးမခံတဲ့အတွက်ငါ Gelid ဝယ်လိုက်တယ်) စီးပွားဖြစ်မောင်းနှင်သူနှင့်အတူ Wine on Steam မှတစ်ဆင့် Kerbal Space Program (L4D2, Doom 3, FEAR2နှင့် COD ပင်) ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဘာပြသနာမှမရှိခဲ့ပါ။
icon လေးတွေကိုကြည့်မယ့်အစား KDE တည်ငြိမ်မှုကိုကြည့်မိတယ်။ ပထမအချက် - KDE 4.11 သည် AMD ၏စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများနှင့်ကွဲလွဲနေသည်။ အနည်းဆုံး Catalyst 13.11 driver ကို OpenGL ကိုချိုးဖောက်ပြီးအကျိုးဆက်များပျက်သောကြောင့် install လုပ်၍ မရပါ။ အခုငါ့မှာ ၁၃.၈ ရှိပြီးငါမတိုက်ဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ခါတစ်ရံ applications များသူတို့ကိုရွေ့လျားခြင်းဖြင့်ရုံကျလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ KDE မတိုင်ခင်အထိကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့ပါ။
ထိုအသေးစိတ်အချက်များအပြင်၊ ကျွန်ုပ်၏ Velikaya Slava (ကျွန်ုပ်၏ HP Envy M6-1105dx) သည် Silk ကဲ့သို့ COOLER ကို အသုံးပြု၍ ပင်လည်ပတ်သည်။ ကျွန်ုပ်စက်ရုံတွင်တပ်ဆင်ထားပြီးအပူနှင့်ပက်သက်သောချို့တဲ့မှုမရှိသော multicore (သို့) AMD အတွက်အတိအကျမသတ်မှတ်ထားသော Kerbal နှင့်ပင်) ။
အခုတော့ ... fuck ဆိုတဲ့အတွက်ပဲ ... underpants လို distro ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ Linux hooker တစ်ခုမှ (ကမ္ဘာတွင်ဂုဏ်ယူမှုအရှိဆုံးနှင့်ဆိုလျှင်); သင်၏သုံးသပ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - i / 5. i = SQRT (-1) နှင့်အတူ။ စိတ် ၀ င်စားမှု နည်း၍ သင် distro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်လိုပါက၎င်းသည်မခက်ခဲသော virtual machine တွင်ဖြတ်သန်းပါ။
Yuriy Istochnikov အားပြန်ပြောပါ
ငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါမြန်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမှားခဲ့တယ် ခွင့်လွှတ်ပါ ငါအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်
Proxima DistroView- Ubuntu
တောင်းပန်ပါတယ်လက်ခံခဲ့သည်လူကြီးလူကောင်း, လူတိုင်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရွှံ့နိုင်ပါတယ်။ 😉
ပထမ ဦး စွာဤ blog တွင်မျှဝေလိုသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်ထင်သောအရာသည်အရာအားလုံးသည်သင်ထင်သလောက်မထွက်လာဟုထင်ရသည် ဘာမှမမှားသောလူ။ မကောင်းတဲ့အရာတွေဆီကနေသင်ယူပါ၊
အကြံပြုချက်အနေနဲ့ kubuntu test ကိုထပ်လုပ်ဖို့ပြောမယ်။ သင်ပိုမိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုထင်သောမှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်။ ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်သင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။
အစပိုင်းမှာ LinuxMint + KDE ကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်သော်လည်း Kubuntu ကမဆိုးပါဘူး၊ KDE မိသားစုမှပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးလက်ခံနိုင်လောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်လည်းရှိပါသည်။ အသုံးပြုသူအဖြစ်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ 1 နှစ်
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကသင် Kubuntu ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုပြီးဖြစ်သည်။
အခုတော့ ကျနော့်အမြင်ကတော့လုံးဝကွဲပြားတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်တပ်ဆင်ရန်တောင်းသောလူသစ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ပေးသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအကြံပြုပြီး ဆက်လက်၍ အကြံပြုလိမ့်မည် (ရှိသည်။ Kubuntu 12.04.3 ။ Kubuntu 14.04.1 မထုတ်မချင်း)
ပထမ ဦး စွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက windows အသစ်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အသွင်အပြင်တစ်ခုပါ။ ထိုအခါ QT ၏ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးသည် GTK ၏ကမ္ဘာထက်အဟုတ်သို့မဟုတ်ဟုတ်သည်ထက်သာလွန်သည်။
ဒုတိယအချက်က၊ ကျွန်တော်တို့ဟာစနစ်တကျစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာစားသုံးမှုနည်းတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအားလုံးရှိရင်သင့်မှာအားကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်ခုရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ်အဲဒါဟာအမြင့်ဆုံးအသုံးချရမဲ့စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ အိုးအပြင်ဘက်မှာဘာမှမလုပ်ပဲ Gnome ပတ်ဝန်းကျင်ထက်ပိုပြီးသွက်လက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဤကဲ့သို့သောအရာနှင့်အတူ:
- "High resolution နှင့် CPU နိမ့်" ကိုရွေးပါ၊ "ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းမှု" တွင် "Appearance of applications" ၏။ ပို၍ ပင် ပို၍ ကောင်းမွန်အောင်သင်သည် "Low resolution နှင့် CPU low" ကိုရွေးချယ်ပါက။
- ဂရပ်ဖစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၌ "မှုန်ဝါးသော" အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသောမည်သည့်အရာမထည့်ပါနှင့်။ သငျသညျဆိုးကျိုးများကို disable လျှင်ပို။ ပင်ပိုကောင်းအောင်။
- « semantic desktop »ကို« desktop search »မှပိတ်ပါ။
- Virtual Desktop တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုသာထားပါ။
- "Startup and shutdown" ၏ "Session management" မှ "အမြဲတမ်းအချည်းနှီးသော session တစ်ခုဖြင့်" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် "အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့အများကြီးအရာများ" ရှိ၏ ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန်ပြုသည်; နောက်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ၊ နောက်ခံပုံများ၊ စာသားအသစ်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ desktop ကိုညှိခြင်းဖြင့်မည်သူကဘယ်သူလဲ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့နှင့်အတူငါထပ်ခါတလဲလဲ, (အသုံးပြုသူများအများအပြားကအတည်ပြုပြီး) Gnome သို့မဟုတ်သစ်ကြံပိုးပတ်ဝန်းကျင်ထက်ပိုမိုခေတ်မီ KDE ရှိသေး၏။ နောက်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်နိုင်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်မထည့်သွင်းချင်ပါ။ အင်္ဂါရပ်များစွာကိုပိတ်ထားပြီးသော်လည်း GTK environments ထက်သာလွန်သောဂရပ်ဖစ်အဓိပ္ပာယ်အရည်အသွေး၊ ဂ3K၊ Clementine, Amarok, Dolphin, Okular ကဲ့သို့သော GTK ၏ထပ်တူညီချက်များထက်သာလွန်နေသေးသည်။
ဖန်သားပြင်မှအိုင်ကွန်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအကြောင်းသင်ပြောခဲ့သည့်အရာအကြောင်း။ ငါဆိုလိုတာကငါဘာမှမပြော၊ ငါဖန်သားပြင်မှာအိုင်ကွန်တွေကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ ငါ့ရဲ့ desktop ကို 100% လုံးဝသန့်ရှင်းအောင်ထားတယ်၊ ငါ့ panel ကနေအရာရာတိုင်းကိုကြည့်တယ်။ သင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အိုင်ကွန်များကိုထည့်ချင်သောအခါမည်သည့်အခက်အခဲများရှိသည်ကိုပိုမိုသိရှိရန်စိတ်ဝင်စားသည် (ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသူများအသစ်အတွက် windowsera ကို အသုံးပြု၍ ထိုထုံးစံကိုမေ့သွားပြီးကျော်လွှားရန်ဆက်လက်အကြံပေးသော်လည်း)
ဝီကီပီးဒီးယား၏မိတ္တူကူးခြင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏အမြင် + ကောက်ကောက်ပုံသဏ္iconsာန်များပါသည့်ဖန်သားပြင်အချို့ - အလွန်ဆင်းရဲသော«ဆောင်းပါး»အမှန်ပင်။
ကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဝေခြင်းကိုအမျိုးအစားခွဲရန်စိတ်ကူးကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထင်မြင်ချက်များကိုမတရားဆုံးဖြတ်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သူအရေအတွက်ကြောင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ မင်းထင်မြင်ချက်ကိုငါဝေမျှသည် kubuntu သည်အနည်းငယ်ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုရှိသည်။
အကယ်၍ သင်လိုချင်လျှင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုစီ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများစွာကြောင့်၎င်းဖြန့်ဝေမှုများသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဆိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်နှင့် ၁၀ သို့တိုးမြှင့်နိုင်သည့်စံနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စနစ်တစ်ခုကိုနက်နက်နဲနဲမသိပါကဤကဲ့သို့သောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုမခံယူပါကကျွန်ုပ်သည် Kubuntu ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဗားရှင်းများ (BlueSystems ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်) သူတို့တိုးတက်လာသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။
၀ မ်းနည်းစရာမလိုပါ၊ ဆက်လက်ပါ ၀ င်ဆောင်ရွက်သွားပါ။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးသည်အများပြည်သူအတွက်မီးစများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျူးဘားမှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။
KDE သို့သုံးမှတ်သုံးခုနှင့် XFCE သို့သတ်မှတ်ချက် ၃ ခုသတ်မှတ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ Xubuntu ကိုသုံးရန်လွယ်ကူသည့်အချက်များကို Kubuntu ထက်ပိုမို ပေး၍ ဤဆောင်းပါးသည်ရည်မှန်းချက်နှင့်မဝေးပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်နာကျင်စွာညံ့ဖျင်းပြီးမှားယွင်းနေသည် ဖြစ်၍ ၎င်းသည် RAM (Boot လုပ်ထားသည့် ၅၀၀ မဂ္ဂါဝပ်) ကိုစားသုံးသင့်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လှပသည်ဖြစ်စေ၊ မလှသည်ဖြစ်စေအလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းကဲ့သို့လုံးဝလုံး ၀ ထိရောက်မှုရှိသောမေးခွန်း (ငါကြိုက်သည်) သည်အလွန်တရာကြီးမားသည်။ ပြင်ဆင်နိုင်သော်လည်းမွန်းလွဲပိုင်းတွင်အရာရာတိုင်းကိုလေ့လာရန်မလိုအပ်တော့ဘဲသင်အနည်းငယ်နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာပြီးမည်မျှမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်ကိုသင်သဘောပေါက်သည်။ စကားမစပ် Steam ကို install လုပ်ခြင်းသည် "sudo apt-get install steam" X_D ကိုရိုက်ခြင်းကဲ့သို့ခက်ခဲသည်